Kwapịa Ngwunye Linear nke 60W Nwepụta Ntugharị Ndagharị China Manufacturer
Nkọwa:Ngwọta Na-enwu ọkụ na Linear,Akụrụngwa Ngwá Ọrụ Ledar,Ngwunye Ngwá Ọrụ Na-agbanwe N'ihu
Home > Ngwaahịa > LED Linear High Bay Light > Kwapịa Ngwunye Linear nke 60W Nwepụta Ntugharị Ndagharị
Ihe Nlereanya.: BB-GKD-60W-2F
2ft ogologo 60W Led Linear Lighting Solutions with 7800 lumens very bright, Save energy of over 50%! The 60w Dugara Linear Retrofit Kit nwere ike bee gị electric ụgwọ na ọkara iji ọkọlọtọ 200 watt elu n'ọnụ mmiri lights.5 afọ ogologo factory akwụkwọ ikike. A na-etinye Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ndabere nke a na Ndabere na nkwụnye kpara nkwekọ, ị nwere ike idozi elu site na 0-4ft dabere na gị chọrọ. ogologo ogologo maka gị ka ị dị mfe ma wụnye nchịkọta linear . Ngwunye ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ dị mma maka ịzụ ahịa ma ọ bụ mmepụta ihe n'ahịa, dị ka Ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ ahịa, Ụlọ Ahịa, anụ ọkụ ọkụ, na ihe ndị ọzọ. Nke a mere ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ zuru oke maka Ogwe / Ụlọ Ụlọ / Garage na-enye nnukwu ụgwọ & ike nchekwa ụzọ bụ isi maka obodo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obere ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-efu anyị ruo 50,000 hour lamp life.
4W 300A Nweta Linear Suspension High Bay Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
Ngwọta Na-enwu ọkụ na Linear Akụrụngwa Ngwá Ọrụ Ledar Ngwunye Ngwá Ọrụ Na-agbanwe N'ihu Ụlọ ọkụ na-enwu ọkụ na gas Elu Bay na-enwu ọkụ na-agbanwe Ogwe ọkụ na-enwu ọkụ maka gas ọdụ Azụmahịa na-enwu ọkụ Egwuregwu na-enwu ọkụ